Otu esi ejikọta akpụkpọ anụ na akwara | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 28/05/2022 10:28 | Nlekọta onwe onye, Dabara, Fitness, Nri, Ahụike
Ọtụtụ nri na-amalite n'ụkwụ aka nri na nsonaazụ ejedebe na-enwe afọ ojuju. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na-akpọsa ibu arọ ahụ nke ukwuu, ọ nwere ike ahụ adịghị enweta ụdị nke anyị ga-achọ. Akpụkpọ ahụ nwere ike kwụpụ n'ahụ ahụ n'ihi na e belatabeghị ya na n'isiokwu a, anyị ga-enwe ike inye ndụmọdụ ụfọdụ otú e si arapara akpụkpọ anụ ahụ.
rụrụ akpụkpọ na-eme mgbe mkparị siri ike, ebe ọ na-eme na enwere oke akpụkpọ ahụ. Ịkwụsị nkwụsị a abụghị ọrụ dị mfe ma na-achọ ụzọ ziri ezi na ọtụtụ nraranye. Eziokwu a na-eme na nri mgbe ha dị oke egwu ma ọ bụ n'ime ime. N'ọtụtụ ọnọdụ ndị a mgbe niile A na-atụ aro ka ị felata nke nta nke nta na ọ bụghị na mberede. nke mere na ahụ na akpụkpọ ahụ na-eme ka ọdịdị ha dị mma.
1 Otu esi ejikọta akpụkpọ ahụ na uru ahụ, ma ọ bụ zere oke akpụkpọ ahụ
1.1 Malite na nri dị mma
1.2 Mee mgbatị ahụ iji bulie ụda
1.3 Ude na-eme ka akpụkpọ ahụ sie ike
1.4 Hydrolyzed collagen maka flaccidity
Otu esi ejikọta akpụkpọ ahụ na uru ahụ, ma ọ bụ zere oke akpụkpọ ahụ
Ọ na-abụkarị na n'ọnọdụ ndị a akpụkpọ ahụ enweghị oge iji nwetaghachi ọdịdị ya ma na-achọ oge iji mee mgbanwe na ọnọdụ ọhụrụ ahụ, ma n'ọtụtụ ọnọdụ akpụkpọ anụ ahụ kpọgidere anọgidewo n'ebe ahụ ma nwee ike ịnọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ bụghị ihe niile agwụla, ọ bụghị ihe niile na-eme onye ọ bụla, ya mere na-ekpochapụ akpụkpọ sagging Ọ naghị ekwe omume, ma ọ dịghịkwa mfe.
Malite na nri dị mma
na nri nri ga-abụ isi iyi enyemaka nwetaghachi elasticity na ike nke akpụkpọ ahụ. Nri kacha mma bụ ndị nwere ezigbo isi nke collagen na elastin; anyị nwere ike ịhụ ya na karọt, salmon, walnuts, arugula, kale, tofu na soybean.
Nri ndị ọzọ ị ga-agbakwunye bụ ndị nwere vitamin C na anyị nwere ike ịhụ ya na mkpụrụ osisi citrus dị ka oroma na kiwi na akwụkwọ nri dị ka brokoli. Nke vitamin E Ọ dịkwa mkpa na anyị nwere ike ịhụ ya na mkpụrụ osisi, almọnd, mmanụ sunflower na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ọ bụrụ na ị ka na-agbaso nri siri ike, ị gaghị echefu nri ndị a kwesịrị ịbụ akụkụ nke oriri kwa ụbọchị. Mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, protein na legumes ekwesịghị ịpụ na nri. Akụ, azụ mmanu mmanu, mmanụ oliv na ube oyibo dị ezigbo mma ịwepụ ezigbo ụda nke oriri na-edozi ahụ na akpụkpọ ahụ. A machibidoro iwu ka ị ghara iri nri esiri esi nri ma ọ bụ achịcha dị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Mee mgbatị ahụ iji bulie ụda
Ihe omume kachasị mma maka ụda akpụkpọ ahụ bụ Mee mgbatị ahụ na ibu arọ. Anyị amaraworị na ibuli ibu nwere ike ọ gaghị abụ ihe na-amasị onye ọ bụla, ọ na-adịchaghịkwa ndị inyom na-achọghị ịdị na-ele anya nke ukwuu. Otú ọ dị, ụdị mmega ahụ bụ ihe kachasị mma itinye n'ọrụ maka akpụkpọ anụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụgharị mmega ahụ cardio maka ibu ibu. Ọ bụghị ihe niile dị njọ, mana anyị ga-akọwapụta na ọ nwere ike ime ka ị ghara ibu ibu ma ghara ime ka uru ahụ dị nro. Mmega ahụ mmega ahụ Ọ na-emekwa ka ọnọdụ akpụkpọ ahụ dịkwuo mma ma na-akwalite mgbasa ọbara.
Ude na-eme ka akpụkpọ ahụ sie ike
Ude nwere ike inyere moisturize akpụkpọ ahụ nke ukwuu, ma enweghị ọrụ ebube ude nke nwere ike ịrụ ọrụ niile. Nke ude bara ụba na aloe vera dị mma, ebe ọ bụ na ha nwere nnukwu moisturizing na regenerating mmetụta.
Ịhịa aka n'ahụ bụ ụzọ dị mma isi kwalite toning na akpụkpọ elasticity. Itinye ude pụrụ iche na ịhịa aka n'ahụ kwa ụbọchị ga-abụ ezigbo nhọrọ. Mana ịme ọ dịkarịa ala ịhịa aka n'ahụ abụọ n'izu ga-ezurularị.
Hydrolyzed collagen maka flaccidity
Ihe oriri bara ụba nri bara ụba na collagen dị mma, ma onyinye nke hydrolyzed collagen ga-enyere ọtụtụ ihe dị ka ọdịdị nke wrinkles na akpụkpọ ahụ, nkụchi ya, laxity nke anụ ahụ anụ ahụ na n'ihi ya ọ ga-enyere akpụkpọ ahụ aka inwekwu olu.
Na-ewere mgbakwunye a Ọ ga-enyere aka ịkwalite mmepụta nke elastin na fibrillin. Nke a bụ isi maka akpụkpọ ahụ wrinkled na-enweghị ngbanwe, n'ihi na ọ ga-enyere aka ọbụna ịbawanye hydration.
N'okwu ndị dị oke njọ na ebe ụzọ ndị a dị ọkụ, ọ kacha mma ịmalite na etiti ebe ha nwere ike itinye usoro dịka la electrostimulation. Usoro a na-enyere aka flaccidity, karịsịa na afo, buttocks, thighs na ogwe aka.
Ịhịa aka n'ahụ LPG ha dịkwa oke mma. Ọ nwere igwakorita anụ ahụ mechanized nke na-ahapụ abụba na-eguzogide ọgwụ ma na-enyere aka ịkwado akpụkpọ ahụ. Ọgwụgwọ ya bụ ahaziri onwe ya ma nwee nsonaazụ dị mma.
Dịka nkwubi okwu ikpeazụ, anyị ga-egosipụtarịrị ọtụtụ isi ihe dị mkpa iji mee ka akpụkpọ ahụ dị mma mgbe anyị na-eme nri na-efu ibu siri ike. Kwesịrị na-aṅụ mmiri buru ibu ma na-abawanye oriri protein iji kwughachi uru ahụ na mgbatị ahụ kwa ụbọchị.
Ọ ka mma ime Mee mgbatị ahụ na ibu arọ iji ụda na-agụnye na nri nri bara ụba na collagen na elastin. Mmega ahụ kwa ụbọchị maka calorie na-ere ọkụ dị mma, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ụfọdụ na-abụghị ibu, ị nwere ike ịme ya eriri 15 nkeji kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Otu esi ejikọta akpụkpọ ahụ na akwara